सेमेल अध्ययन: SEO तपाइँको वेबसाइट मा के जोड्दछ?
जब एक व्यक्ति अनलाइन सर्फ गर्न जान्छ, तिनीहरू केहि जानकारी प्राप्त गर्ने मनसायले त्यसो गर्छन्। यसको मतलब यो हो कि तपाईं (कम्पनीको रूपमा) माछा वेबसाइटमा एक अनलाइन उपस्थिति हुनुपर्दछ। केवल एक वेबसाइट हैन, एक राम्रो वेबसाइट जुन खोज इञ्जिन नतीजा (SERPs) मा उच्च स्थानमा छ। प्रवृत्तिको साथ जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूले खरीद गर्नु अघि हेर्छन्, राम्रो वेबसाइट भएकोले तपाईंलाई राम्रो फिर्ताको ग्यारेन्टी दिन्छ।
लिसा मिशेल, ग्राहक सफलता प्रबन्धक Semalt , SEO को महत्त्व वेबसाइट निर्माण गर्दा निर्दिष्ट गर्दछ।
हालसालैका वर्षहरूमा, सम्भावित ग्राहकहरू उनीहरूलाई के अनलाइन खरीद गर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको खोजीमा छन्। तिनीहरू खरीद गर्न अघि उत्पादन हेर्न चाहन्छन्। यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, प्राय: परिणामहरूको पहिलो पृष्ठ पछाडि जानु हुँदैन। यो संकेत गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइट विशेष कुञ्जी शब्दहरूको लागि धेरै उच्च हुनुपर्दछ। यहाँ स्पष्ट छ, एसईओ वेब डिजाइन मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
SEO को मान
आजकल वेब डिजाइन र SEO सँगसँगै जान्छन्। जब तपाईले वेब डिजाइनरलाई केहि वर्ष पहिले डिजाइन तत्त्वहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने देख्नुहुनेछ, आज तिनीहरूले वेबसाइट निर्माण गर्दा एसईओ समावेश गर्दै छन्। किन SEO महत्त्वपूर्ण छ र यसले तपाईंको वेबसाइटमा कुन मूल्य थप गर्दछ? ठीक छ, एसईओको साथ पूर्ण रूपमा एकीकृत एक वेबसाइटले अधिक ट्राफिक ल्याउँदछ, जसले अधिक बिक्रीमा अनुवाद गर्दछ। तपाईंसँग राम्रो साइट हुन सक्छ, तर यदि यो कीवर्डको पहिलो पृष्ठमा छैन भने, तपाईंको प्रयास बेकारमा छ। त्यो मूल्य हो जुन SEO लाई साइटमा थपिन्छ। SEO एकीकरण गाह्रो छैन, यी पक्षहरूमा सरल - नेभिगेसन, लि ,्क, सामग्री - र तपाईं जानु राम्रो छ।
सामग्री, कुञ्जी शब्द र लिंकहरू
तपाईंको वेबसाइटमा प्रदर्शित सामग्री तपाईंको एसईओ सफलताको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि वेब डिजाइनर तपाइँको वेबसाइट मा काम गर्दछ, निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूलाई तपाइँको व्यवसाय को बारे मा सबै विवरण थाहा छ। यो हेरचाहको साथ लिइएको, सबै कुञ्जी शव्द सम्भावित ग्राहकहरूले खोजी गर्न सक्छन् र निश्चित रूपमा उनीहरूलाई तपाईंको सामग्रीमा एकीकृत गर्न सक्छन्। Google र अन्य खोज इञ्जिनहरूले आवश्यक नैतिक अभ्यासहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
तपाइँको सामग्रीहरूमा कुञ्जी शब्द थप्दा तपाइँले वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्दा तपाइँले SEO लाई समावेश नगरी सिर्जना गर्ने पृष्ठहरूमा समान चीज परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्ने समयलाई मद्दत गर्दछ।
लि building्क निर्माणले तपाईंलाई तपाईंको ठाउँको अरू विश्वसनीय वेबसाइटहरूमा जडान गर्न मद्दत गर्दछ।
एक खोज इन्जिन अनुकूल वेबसाइट बनाउँदै
यदि तपाईं एक नयाँ आगमनकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एक क्लासिक, SEO- अनुरूप वेबसाइट डिजाइन गर्न मद्दतको लागि पेशा राख्ने विचार गर्नुहोस्।
भिडियो र फोटोहरू जस्तै दृश्य तत्वहरूको साथ संयुक्त ताजा सामग्री।
निश्चित गर्नुहोस् कि प्रयोगकर्ताहरू सजिलै वेबसाइट मार्फत नेभिगेट गर्न सक्दछन्। खोज बट्सका लागि पनि त्यस्तै गर्नुहोस्।
सौंदर्यशास्त्र र खोज रैंकिंग।
एक राम्रो वेब डिजाइनर नेत्रहीन अपीलिंग साइट सिर्जना गर्ने सार बुझ्दछ। याद राख्नुहोस्, तपाइँको वेबसाइटले दुनिया मा तपाइँको व्यवसाय को प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसैले यो निराश हुनु हुँदैन। पहिलो प्रभाव यस बारेमा छ। यसले तपाईंको पैसा खर्च गर्दछ, तर एसईओको शक्तिलाई कहिल्यै हल्का नपार्नुहोस्। यदि तपाईं आवश्यक अनुसार यसलाई एकीकृत गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुनेछ, र तपाईंको बिक्री माथि दर्साइनेछ।
वेब डिजाइन गतिशील छ, र प्रविधिको आविष्कार बर्षको आविष्कार भएको छ तपाइँलाई निर्बाध एसईओलाई आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत गर्न मद्दत गर्न। तपाइँको खेल माथि।